Faa'iidooyinka Gabdhaha Dameerka Yar ee Faa'iidooyinka 160CM Jacaylka Jinsiga Dolls Donna
Naasaha waaweyn caruusadaha galmada,G koob caruusadaha galmada,Caruusadaha galmada caato ah
Donna - 160CM Naaso Aad U Weyn Naaso Naaso Weyn Oo Yar Dameer Gabar TPE Jinsiga Doll
Caruusadaha galmada ee AXB guud ahaan waxaa lagu sameyn karaa 3-6 maalmood. Naqshadayaasha khibradda leh waxay ku bixin karaan baakado soo jiidasho leh muddo gaaban. Caruusadaha Jacaylka had iyo jeer waxay isticmaalaan qaybaha isku imaatinka ugu fiican. Kooxda xakamaynta tayada ayaa had iyo jeer ku sameeysa kormeer madaxbannaan iyo kormeer ku saabsan laynka isku imaatinka iyo aagga kaydinta ka hor rarka si loo hubiyo tayada 100%. Dhammaan alaabooyinka waxay heleen shahaadada CE, kooxda oo dhana waxay isku dayi doonaan sida ugu fiican si ay u siiyaan adeegyo heer sare ah dhammaan macaamiisha.
Miisaan ： 48kg
UstDayaanna ： 140cm
Dhexda ： 60cm
Miskaha ： 90cm
Dhererka gacanta: 62cm
Length Leg: 78cm
Ballaca garabka: 34cm
Qoto dheer siilka: 17cm
Qoto dheer futada: 14cm
Qoto dheer afka: 10cm